Försäkring och skadeersättning - Arbetsförmedlingen
/ Försäkring och skadeersättning
Caymis iyo magdhawga dhaawaca markii aad ka qaybgalayso i barnaamij
Markii aad ka qaybgalayso barnaamijyada Xafiiska shaqada waxaa xaaladaha qaarkood ku khuseeya caymiska [person- och grupplivförsäkringar] ee [Kammarkollegiet] iyo [Statens Pensionsverk]. Caymiska ma hirgalo markii aad ka qaybgalayso taageerada hirgelinta dhaqdhaqaaq ganacsiyeed.
Qaban-qaabiyeha barnaamijka ayaa xitaa soo qoran kara arjiga magdhawga dhaawaca, waa haddii adiga aad sababtay dhacdada dhaawac ee shirkadda.
Hay`adda [Kammarkollegiet] ayaa go`aan ka gaarto gunnada oo ku shruruudaysan ”Avtal om ersättning vid personskada” (PSA).
Dhacda dhaawaca waxaad nagu wargelin kartaa adigoo:
Buuxiya foomka ”Person i arbetsmarknadspolitiska åtgärder” kaasoo laga helo barta internetka ee hay`adda Kammarkollegiet.
Kaddib maamulka Xafiiska Shaqada ka codso in uu qaybtiisa foomka ka buuxiyo.
Waa in adiga iyo qaban-qaabiyeha foomka hoosta ka saxiixdaan.
Ku soo lifaaq caddaymaha kharashyada iyo qeexida dhammaan kharashyada dhaawaca xiriir la lahaa.
Foomka oo buuxsan iyo caddaymaha kharashyada u dir Hay’adda [Kammarkollegiet].
Qaban-qaabiyeha waa in sida hadba waafaqsan xeerarka dowliga ee ku xusan Sharciga Bay’adda Shaqada [Arbetsmiljölagen] iyo Hay’adda Bay’adda Shaqada waa in uu wargeliya Hay’adda Bay’adda Shaqada.
Caymis-kooxeed [Grupplivförsäkring] wuu hirgala haddii aad geeriyooto.
Booqo barta internetka ee Hay’adda arrimaha hawlgabyada [Statens Pensionsverk] Haddii aad u baahan tahay warbixin dheeraad oo ku saabsan Caymis-kooxeedka [Grupplivförsäkring], kaasoo hirgala markii aad ka qaybgalayso barnaamijyada Xafiiska Shaqada.
Haddii adiga aad dhaawaca sababto wuxuu qaban-qaabiyeha arjiga magdhawga dhaawaca u qoran karaa Xafiiska shaqada. Haddii aad aaminsan tahay in qaabka qaban-qaabiyeha u dhacdada u tilmaamay aynan sax ahayn, laf-ahaantaada Xafiiska shaqada ugu sheekeey dhacdada.